Sababta Jurgen Klopp U Ciyaarsiin Waayey Xherdan Xhaqiri Oo La Shaaciyey Iyo Taageereyaasha Oo Aan Si Buuxda Ugu Qanci Karin | Hohad News
Sababta Jurgen Klopp U Ciyaarsiin Waayey Xherdan Xhaqiri Oo La Shaaciyey Iyo Taageereyaasha Oo Aan Si Buuxda Ugu Qanci Karin
Bishii December ayaa si weyn loogu amaanay Liverpool go’aankii ay ku gaadhay inay Shaqiri soo iibsadaan xagaagii, waxaanay sababtu ahayd inuu garoonka soo galay ciyaarta oo 1-1 ah, isla markaana uu qaybta ugu weyn ka qaatay burburintii Red Devils ee sababta u noqotay in shaqada laga caydhiyo Jose Mourinho.
19 daqiiqadood oo kaliya ayuu garoonka ku jiray ciyaartaas, balse saamayntiisu waxay ahayd mid aanay cidina sii malaynin, waxaanu lugtiisa ku dhaliyey laba gool. Sdaas oo kale ayuu mar kale isku muujiyey ciyaartii Newcastle oo uu shabaqa si fudud usoo taabtay.
27 jirka reer Switzerland ayaa intaa wixii ka dambeeyey laga waayey safka koowaad ee Liverpool, waxaana uu tababare Jurgen Klopp ku adkaystay shaxdiisa aan isbeddelka badan lahayn ee 4-3-3 oo afka hore ay kulan walba taagan yihiin Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Sadio Mane iyo laf-dhabarta dhexe ee Fabinho.
Marka laga yimaaddo kulamadii xigay Newcastle ee Arsenal, Brighton iyo Leicester City, waxa uu bannaanka fadhiyey Watgford, Burnley, Everton iyo Fulham, lamana sheegin sababta dhabta ah ee uu laacibkani bannaan-yaalka u noqday.
Haddaba, wargeyska Liverpool Echo ayaa sheegay sababta Shaqiri aan loo ciyaarsiinin, laakiin uma muuqato mid macquul ah oo dadka wada qancin karaysa, gaar ahaan taageereyaasha Liverpool ee sida dhow ula socda qaab-ciyaareedka Shaqiri.
Wargeysku waxa uu sheegay in sababta uu Klopp u tuuray Shaqiri inay tahay in aanu ku fiicnayn difaacista, horyaalkuna marayo meel xaasaasi ah oo aan loo baahnayn in khatar timaaddo, sidaas daraadeedna khadka dhexe looga baahan yahay laacibiin ay fiican tahay difaacistoodu.
Wargeysku waxa uu tilmaamay in Liverpool uu saaran yahay cadaadis weyn oo ah inay hanato horyaalka Premier League oo ay ka soomanayd muddo 29 sannadood ah, taas darteedna aanay qaadan karin wax khatar ah oo khadka dhexe ah.
Saddexdii ciyaarood ee Liecester City, Manchester United iyo West Ham, ayaa uu wargeysku tilmaamay in dhamaantood ay muuqatay in Xherdan Shaqiri aanu ahayn laacib wax qaban karaya marka kooxda ay kubaddu ka lunto, balse kaliya wanaagsan markay kubaddu lugtooda ku jirto. Waxa kale oo uu tilmaamay inuu yahay nin gaaban oo kubbadaha sare aan waxba ka qaban karin.
Si kastaba ha ahaatee, weli tababare Jurgen Klopp si buuxda ugama hadal sababta uu laacibkiisan bannaanka u dhigay ee uu fursadaha u siin laayahay xattaa marka ay goolal leeyihiin.